Topic:Poverty asaMarketing Opportunity
အားဖြင့် Posted: မေလ Anokuru ဒီဇင်ဘာလ 22, 2013
အဘယ်အရာကိုတခါတရံတွင်အကြှနျုပျနှောက်ခြောက်ခေါင်းကဒီမှာစိတ်ဝင်စားမှု၏ကြည်လင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းသည်, ပင်ကိုစေ့စေ့ဆင်ခြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များအတွက်ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုစျေးကွက်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ချဉ်းကပ်လာလျှက်အပေါ် hinged, မဟုတ်လောက်မွှမ်းတင်လူမှုရေးပြဿနာ. ထိုပိရမစ်၏အောက်ခြေ (BoP), concept တစ်ခုအဖြစ်, ၎င်းကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆင်းရဲခြင်းသည်အလယ်ဗဟိုအဆင့်ကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအဘယ်မှာရှိလူမှုရေးအယှက် dousing အတွက်အကျယ်တပါရှိပါတယ်ဘယ်လိုက 'pointer ကို' 'ဘက်လျက်. ကျနော်ဆက်စပ်ဆန်းသစ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်မည်မျှစဉ်းစား (တခြားနေရာကို 'In-အရာ' 'ဖြစ်လာရသော) လက်ရှိနိုင်ဂျီးရီးယားမှပေးကြရနိုင်. တစုံတခုကိုမျှမသတိမပြုမိဖြစ်ကြောင်းကို.
ဆင်းရဲမွဲတေမှုကနေအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးစစ်မှန်သောကြံ့ကြံ့ခံကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရှိအခြေအနေမျိုးမှာ, ဒါကြောင့်ဆင်းရဲသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်အခြေခံထားသည့်စျေးကွက်များထိုးဖောက်ဖို့လိုအပ်လျက်ရှိသောနည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှု breakthrough သည်မဟုတ်. ထက်, ဒါကြောင့်တ္ထုတစ်ပုဒ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနီးလာသည်လှည့်-ပတ်ဝန်းကျင်လူမှုရေးပြဿနာများ, ပြည်သူများ၏ဘဝများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနေစဉ်ကုမ္ပဏီများကိုငွေရှာခွင့်ပြုခြင်းနှင့်သူတို့ကိုဆင်းရဲတွင်းထဲကမထကူညီပေးနေ.
C.K. Prahalad and others have it that the poor comprise the ‘resilient and creative entrepreneurs’, '' တန်ဖိုးအသိစိတ်စားသုံးသူများ '', '' အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံး '' ဆင်းရဲသားများနှင့်ဆက်စပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ၏ကနဦးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အတက်လာစဉ်. ဖွယ်ရှိ Initiative အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသောစီးပွားရေးပုံစံ - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဤချဉ်းကပ်မှုပုံစံသည်ဆင်းရဲသားစျေးကွက်များပေါ်တွင်ထမ်းလျက်ပြီးမှနှင့်အတူ (e.g. နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးများ, အသေးစားပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏) ဆင်းရဲသား (နှစ်ဦးစလုံးထုတ်လုပ်မှုနှင့်စားသုံးမှုဖြစ်စဉ်များတွင်ပါဝင်သောသူ) - အဲဒီနောက်ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးလွယ်ကူပြောဆိုချက်ကိုစေသည်, သာ. ကြိုးကိုင်လူမှုရေးပြဿနာတွေထက်.
ရေတွင်းလူသိများ "Marketing ကို4ဆာ" စဤနည်းများဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်အောင်ရည်ရွယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်သက်ဆိုင်:
product - အဘယ်အရာကိုဘဏ္ဍာရေးလဲလှယ်ပေးလျက်ရှိသည်, ပိရမစ်၏ 4th ဆင့်မှာသူတို့နှင့်အတူဒီစီးပွားရေးဆက်ဆံရေး, ထုတ်ကုန်များမှာ, ရေပေးဝေရေးအတွက်အ point-of-သုံးစွဲမှုစနစ်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသို့မဟုတ်နည်းပညာ; ကျန်းမာသန်စွမ်းအစားအသောက်ထုတ်ကုန်; Micro-ဘဏ္ဍာရေးသို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းငွေလွှဲလုပ်ငန်းစနစ်; အိမ်ရာ; နှင့်စွမ်းအင် (off-ဇယားကွက် power supply).
စျေးနှုန်း - ကကုန်ကျဘယ်အ, ငွေကြေးဆိုင်ရာနှင့်စစ်မှန်သောအသုံးအနှုန်းများအတွက်. အရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်စျေးနှုန်း sensitivity ကိုဒီမှာသက်ဆိုင် (BoP စားသုံးသူကိုလည်းအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုခံထိုက်). အဘယ်အရာကိုဒီဈေးကွက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်အလွန်သေးငယ်ယူနစ်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးရန်ဖြစ်သည် (e.g. ထိုအစိတ်အပိုင်းအားဖြင့်စီးကရက်ရောင်းရွာလက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်, ကို 'အထုပ်' နဲ့ချွတ်ဆေး, နှင့်ဖန်ခွက်သို့မဟုတ်ခွက်ဖလားကိုအားဖြင့်အချိုရည်).
ရာဌာန - ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဒီဈေးကွက်မှာဝယ်ယူခံရနိုင်တယ်ဘယ်မှာတစ်ခါတစ်ရံတွင်အရောင်းဆိုင်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုစေသည်, ကောင်းတစ်ဦးထောက်ပံ့ရေးကိုယ်တိုင်ကဆက်ထိန်းဖို့အမြတ်အစွန်း entails ကြောင်း channel နှင့်ထိရောက်မှုနှင့်အတူ. အများစုမှာကြိမ်, ကုန်သည်များကဖောက်သည်မှနောက်ထပ်ဝန်ဆောင်မှုပေး (e.g. အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက်, နှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်အကြွေးပင်ပြဌာန်းချက်, ရွာတွေမှာရှိတဲ့သူတွေကမကြာခဏလူသိများသကဲ့သို့).
မြှင့်တင်ရေး - BoP ဈေးကွက်များအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများသူတို့ကိုလူသိများအောင်မှတိကျခိုင်မာစွာမြှင့်တင်ရေးလိုအပ်, အကျိုးအမြတ်ကိုသူတို့ထောက်ပံ့နိုင်သောပေးအပ်ခြင်းရုပ်သံလိုင်းအတွင်း. ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်နေပြီးတခါတရံရှည်ရှည်မြှင့်တင်ရေးကိုမကြာခဏကြောင့်ဆင်းရဲသားများအတွက်စျေးကွက်၏ကွန်ဆာဗေးတစ်သဘာဝပေးရန်လိုအပ်သည်. ကျေးလက်ဒေသဖောက်သည်, အများဆုံးကြိမ်, ထိုသူတို့သည်ဆီဝယ်ချင်တဲ့အရာကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်. ဆန္ဒပြပွဲ BoP စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အရေးကြီးသော tool ကိုသရုပ်ဖော်သည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်.
ကျွန်မက "စီးပွားရေး Fight ဆင်းရဲမွဲတေမှု" ကို subscribe, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတစ်ဦးချင်းစီ၏အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်း, နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များ, အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ, နှင့်ပညာရေးလောကကိုစီးပွားရေးအားဖြင့်ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုတိုက်ဖျက်ဘို့စိတ်အားထက်သန်မျှဝေသောသူ. နိုင်ဂျီးရီးယားအဖြစ်, ငါကအဲဒီမှာ '' loner '' ဖြစ်ကြောင်းကိုဟန်. ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါ့နောင်တော်ကြီးတစ်ဦးအရေးအနည်းငယ်ဘယ်လိုအချို့အပေါ်အတွေးအခေါ်များကိုလှုံ့ဆော်ရန်အထောက်အကူပြုသောဤပလက်ဖောင်း၏ညွှန်ကြားချက်တွင်ကြည့်ရှုလေ့ရှိကြောင်း၎င်း၏လူယိမ်းနွဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဆီလျော်တဲ့ကာယကံရှင်များ၏မရှိခြင်း-တောက်ပသဘောထားကိုကြည့်ရှု 112 သန်းဆင်းရဲသားကိုနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကိုဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုကျေးဇူးပြုနှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုလျက်အဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်.
သုတေသနစင်တာများ, ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ, များနှင့်အခြား climes အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှမှန်မှန် BoP ဆက်စပ်တီထွင်မှုနှင့်စီးပွားရေးမော်ဒယ်များထွက် churning နေကြတယ်. နိုင်ဂျီးရီးယားသွားရာလမ်း-On ကနေလုံးဝ insulator တွင်လည်းဟန်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်အံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်. ဒီနေရာမှာအာကာသကင်းမဲ့ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များကိုသာအဲဒီဥပမာများကိုပေး (အကြောင်းကနေ 150 ကျွန်မအားဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်), ဒီလိုကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏အဘယ်သူမျှမနိုင်ဂျီးရီးယားတွင်ပုံတူကူးယူရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအဖြေအတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု:
– Global Positioning System (ဂျီပီအက်စ်) ငါးဖမ်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်အမျိုးသမီးများကလုပ်ကိုင်နည်းပညာ, အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိယင်းတို့၏မိသားစုများ '' လုပ်ငန်းခွင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန် (သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ).
-ဆင်းရဲမွဲတေကျေးလက်အမျိုးသမီးများအဘို့အ Unilever ကုမ္ပဏီရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, ကျန်းမာရေးနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များလက်လီမှတဆင့် (အိန္ဒိယ).
-မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်၏ Vodafone ၏မိတ်ဆက်စကား, M-PESA (ကင်ညာ, တန်ဇန်းနီးယား).
– ၎င်း၏ '' Ekos '' အလှကုန်လိုင်းအတွက် "Priprioca" မိုးသစ်တောစက်ရုံအမွှေးအကြိုင်များ၏ Natura ရဲ့အသုံးပြုမှု (ဘရာဇီး).
-အစဉ်အလာစုဆောင်းခြင်းဖြင့်ဒေသခံ "Susu" မိုက်ခရိုငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် Barclays Bank ၏ပြုတ်ရည် (ဂါနာ).
– ဝင်ငွေတိုးပွားအတွက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးတန်ဖိုးကွင်းဆက်အတွက်လယ်သမားငယ် '' ပါဝင်မှုအဘို့အ Treadle စုပ်စက် (ဘင်္ဂလားဒေ့, အိန္ဒိယနှင့်နီပေါ).
– အလွန်ဆင်းရဲသူ၏အိမ်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းရန်ဘိလပ်မြေပေး Holcim ရဲ့ 'အိမ်-for-Life' 'မော်ဒယ် (သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ).
– smart card ကိုနည်းပညာဖြင့် Amanz'abantu ရဲ့ကျေးလက်ဒေသရေရရှိရေး (တောင်အာဖရိက).
– အသေးစားလယ်သမားပေးသွင်းသူများအဘို့အ Dimitar Madzarov နို့ကိုဂရုပြုစောင့်ရှောက်မှုစနစ် (ဘူလ်ဂေးရီးယား).
– Bosch, Siemens နှင့် Hausgerate (BoA) cooker, အုန်းဆီများကြောင့်လောင်စာ (အင်ဒိုနီးရှား).
– INENSUS '' သေးငယ်တဲ့လေတိုက်တာဘိုင်များနှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကိုစွမ်းအင်စနစ်များ (Mauritania).
– အဆိုပါကြွေထည်ပစ္စည်းကိုရေ filtration system ကို (နီကာရာဂွာ).
– တိရစ္ဆာန်ထိန်းကျောင်းသူများ '' သိုးနွားခြေရာခံ, ဆဲလ်ဖုန်းနှင့် Global Positioning System ကိရိယာများသုံး (ဆီနီဂေါ).
– လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသေးစားလယ်သမားများ၏ Shoprite ရဲ့ထောက်ခံမှု (မိုဇမ်ဘစ်).
– DANONE ရဲ့ဒိန်ချဉ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရောင်းအစီအစဉ်ကို (ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်), ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးကိုကောင်းစွာ စုစည်း. ကွန်ယက်ကိုအသုံးပြု, "ဂရာမင်း Ladies"(ဘင်္ဂလားဒေ့).
အထက်ပါအားလုံးဆင်းရဲတွင်းထဲကသန်းနဲ့ချီတဲ့ဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိကြသည်, နှင့်စျေးကွက်အရေးကြီးသည်အခန်းကဏ္ဍကစားဘယ်မှာတီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့စီးပွားရေးပုံစံကနေဆင်းသက်လာခဲ့ကြ. စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုမဆိုပြောဆိုချက်ကို, လူမှုရေးပြဿနာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘာဝကျပါတယ်အစားထက်.
မှတ်ချက်ပေးရန်ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ် အပေါ် "တစ်ဦး Marketing ကိုအခွင့်အလမ်းများအဖြစ် "ဆင်းရဲမွဲတေမှု, ယင်းအစားလူမှုရေးပြဿနာသန်း " (2)"